''Obbooleessa koo rasaasa shaniin ajjeesan'' - BBC News Afaan Oromoo
''Obbooleessa koo rasaasa shaniin ajjeesan''
Goodayyaa suuraa Gebremesqel Getaachoo
Magaalaa Waldiyaa keessatti borumtii ayyaana cuupdhaa irra mormii ka'een walqabatee tarkaanfii humna eegdota nageenyaan fudhatameen lubbuu hedduun baduun ni beekama.
Mootummaan namoota torbatu du'e haa jedhu malee, jiraattoonni magaalaa nuti haasofsiifne garuu lakkoofsi namoota du'anii fi miidhamni irra gahee akka sana caalu dubbatu.
Jiraattotarraa akka dhageenyetti, kan du'an keessaa jaarsolii fi ijoolleen umuriin kudhanoota gara jalqabaa lama keessa jiru.
Kana malees, magaalaa Waldiyaa keessatti hojii sibiilaa hojjechuun kan beekamu Gaberemasqel Getaachoo keessatti argama
Gabremesqel nama ganna 35 yeroo ta'u, haadha warraa fi mucaa durbaa waggaa shanii qaba ture.
Gebremesqel nama tattaafataa akka ta'e dhiheenyatti kan isa beekan ragaa bahu. Namni dhaabbata hojii sibiilaa dhuunfaa qabu kun ajjeefamuunsaan dura mana daldalaa tokko magalatti keessatti ijaara ture.
Guyyaa Gabremesqel itti ajjefame, haala inni ittiin ajjefamee fi ergasiis maatiinsaa maal irra akka jiran baruuf obboleessa isaa Kidaanee Geetaachoo hasoofsiifnee turre.
Gabremesqel gaafa Amajii 12, taabota Mikaa'ilaa geggeessee utuu deebi'aa jiruu naannoo Mabiraat Haayil jedhamutti humna eegdota nageenyaa irraa rasaasota dhukkaafamaniin akka ajjefame maatii irraa dhageeneerra.
Obboleessi isaa Kidaaneen ''obboleessi koo rasaasaan bakka shan rukkutamee ajjeefame. Akka lubbuunsaa hin hafneef jecha kan isaan si'a shan rasaasaan rukutan,'' jechuun aariin dubbata.
Kidaaneen wayita guyyaa sana yaadatu ''Hookkarri akka ka'een deddeebisee bilbiluufis na jalaa hin kaafne. Deebisees naaf hin bilbiliin gafa inni hafu baay'ee waanan dhiphadheef barbaachuuf jecha gara hospitaala deeme.
''Morma isaa dabalatee, laphee, garaa fi qaama saalaa irra bakka shan raasaasan rukkutamee dhiigaan kan makamee reefa obboleessakoon hospitaala keessatti argadhe'' jehda haala guyyaa sana ture yaadachaa.
''Amanuun dadhabe. Waan hamaatu obboleessakoo irratti raawwate. Garaa keenya, garaa maatiisaa gubani. Gabremesqeliin rasaasni tokko ni gahaan ture. Nama haadha isaa jaalatu, abbaa isaa kabaju ture. Isa qofa utuu hin taane maatii hunda ajjeesani. Mucaa durbaa ganna shanii tokko qaba. Waan amma irratti raaawwate kana simachuu hin dandeenye, jechuun Kidaaneen aariin dubbata.
Ji'a tokko dura obboleessa isaanii xiqqaa tokko dhukkubaan akka dhaban kan dubbatu Kidaaneen ''gadda irratti gadda cimaa nutti dabalan,'' jedheera.
Gaafa Dilbataas akka sirni awwaalchaa hin raawwanneef gufuu nutti ta'aa turaniiru jechuun kan hime Kidaaneen ''Reeffi isaa gara bataskaana Goorgisiitti awwaalaaf geeffamaa utuu jiruu humni ittisa biyyaa fi korri bittinneessaa rasaasaa fi gaazii imimmeessaa dhukaasuun namoota awwalaaf dhufan bittimeesaa turan,'' jechuun Kidaaneen ibseera.
Pireezidaantii Naannoo Ammara Obbo Gadduu Andaargaachoo dabalatee aangawonni biroonis mana jireenyaa keenyatti argamuun kan nu haasofsiisan wayita ta'u ''nutis obboleessa keenya kan ajjeesse adda bahee seeratti nuuf haa dhihaatu jechuun akka itti himan,'' dubbata.
Pireezidaantiin naannoo kunis Waldiyaa irratti ajjeechaa raawwate booda ibsa kennan irratti dhimmi kun sirriitti adda bahee umataaf ifa ni godhama jechuun isaanii ni yaadatama.
Guyyaa kaleessaa gara galgalaa irras, Mootummoota Gamtoomanitti Komiishinii Mirga Namummaatti dubbi himtuu kan ta'an Aadde Raaviinaa Shaamdasaanii Jeeneevaa irratti ibsa baasaniin ''tarkaanfiin humnaa humnoota waraanaa Itoophiyaan fudhatamaa jiru guddoo nu yaaddesseera'' jedhaniiru.
Qorannoon kun qaama dhiibbaa irraa bilisaa fi walaba ta'een haala si'ataa ta'een geggeefamee, namoonni badii kanaaf itti gaafatamummaa qaban hundi seeratti akka dhihaatan gaafataniiru.